Render ပုံရိပ်တစ်ချို့ကို မြင်တွေ့လာရတဲ့ Mitsubishi ရဲ့ E-Evolution အမျိုးအစားအသစ်! – MyMedia Myanmar
Render ပုံရိပ်တစ်ချို့ကို မြင်တွေ့လာရတဲ့ Mitsubishi ရဲ့ E-Evolution အမျိုးအစားအသစ်!
Mitsubishi က ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကားမော်ဒယ်တွေရဲ့ Lineup ကတော့ အခုအချိန်မှာ ကားစိတ်ဝင်စား ‌သူတွေ စိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့် Performance Models တွေ ဘက်ကို ပိုအသားပေး နေတယ်လို့ ဆိုလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုလက်ရှိ အခြေအနေဟာ မကြာခင် မှာပဲ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး E-Evolution Concept ကား အမျိုးအစား အသစ်ကို Range အတွင်း စတင်ထည့်သွင်း လိုက်တာကနေ စတင်ပြီး ‌ထူးခြားမှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အခု Motor.es ကနေ မြင်တွေ့ထားရတဲ့ Rendering ပုံရိပ် တွေ အရတော့ အခု Sporty Crossover ဟာ ဘယ်လို ပုံစံ ရှိလာမလဲ ဆိုတာကို အနည်းငယ် မှန်းဆလို့ ‌ရနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Concept တုန်းက ပုံရိပ် နဲ့ ယှဉ်ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ အခု Production Version ရဲ့ Render ‌မှာ ပိုပြီးတော့ သိသိသာသာ Aggressive ဖြစ်တဲ့ ပုံစံကို မြင်တွေ့ရမှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ကားရဲ့ အရှေ့ဘက်က အနားသတ်တွေက Two-Tiered Headlights တွေနဲ့ လိုက်ဖက်နေမှာ ဖြစ်ပြီး Grille နေရာကိုမှ အတွင်းဘက်ကို ဝင်နေတဲ့ မြားတစ်စင်းအသွင် ဖန်တီး ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင် Concept မှာတော့ ပိုပြီးတော့ ပါးလွှားချွန်ထက်တဲ့ အသွင်နဲ့ Windshield ကို မြင်တွေ့ ထားရကာ Wraparound Glass တွေ ၊ Suicide Doors တွေ နဲ့ အတူ အခြားသော Floating Roof တို့ကိုလည်း မြင်တွေ့ထားရပြီး အဆိုပါ အမိုးဒီဇိုင်းကတော့ ပိုပြီး ‌ခေတ်လွန်တဲ့ အသွင်အပြင်ကို ပေးစွမ်း နိုင်တာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းတဲ့ တစ်ချက်ကတော့ အခုလိုအချက်အလက်တွေ အကုန်လုံး ကို အခု Production Version ရဲ့ Rendering ပုံရိပ်မှာ မမြင်တွေ့ရ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ကထက် ပိုပြီးတော့ Conventional ပုံစံ ကိုသာ မြင်ရတော့ သလို Aggressive အရမ်းကြီး ဖြစ်တဲ့ ပုံစံ မဟုတ်ရင်တောင်မှ C-Pillar ကတော့ တော်တော်လေး ကွဲထွက် နေစေတဲ့ အသွင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းခန်းပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း ယခင် မြင်တွေ့ ခဲ့ရတဲ့ Concept နဲ့ ယှဉ်ရမယ် ဆိုရင် ပိုပြီးတော့ Conventional ဖြစ်တဲ့ ပုံစံဘက်ကို ပဲ ပြန်ရောက်သွားတာ တွေ့ရမှာပါ။ ကားရဲ့ Cabin မှာ ဆိုရင် Digital Instrument Cluster နဲ့ ကြီးမားတဲ့ Infotainment System တို့ အပြင် HVAC System အတွက် သီးသန့် ထည့်သွင်း ပေးထားမယ့် Display တစ်ခုကိုလည်း မြင်တွေ့ ရဦး မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန် ရဲ့ Spyder7ဆီကနေ ရရှိတဲ့ Rumours တစ်ချို့ အရတော့ အခု Production Version အသစ်ကို အခု ၂၀၂၁ ထဲမှာ တင်ပဲ ပွဲထုတ် ပေးလာနိုင်ပြီး ဒီနှစ်ထဲမှာ ပဲ အရောင်းဈေးကွက် ထဲ ရောက်ရှိလာနိုင်တယ် လို့လည်း သိထားရပါတယ်။
ကားရဲ့ Powertrain အပိုင်းမှာ ဆိုရင်လည်း လျှပ်စစ် မော်တာတွေကို ဝင်ရိုး တစ်ဖက် တစ်ချက် မှာ တပ်ဆင် ပေးလာဖို့ များနေပြီး Battery Pack အနေနဲ့လည်း တစ်ကြိမ်အားသွင်းထားရုံနဲ့ 311 မိုင် ( 500 km ) Range လောက် အထိ ရအောင် စွမ်းဆောင် ပေးလာနိုင် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကားကို ထုတ်လုပ်ရာမှာလည်း CMF-EV Platform အပေါ်မှာ အခြေခံ ပြီး ထုတ်လုပ်လာဖို့ များတာ ကြောင့် Nissan Ariya နဲ့လည်း တန်းတူ ပြိုင်ဆိုင်ရလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လည်း Mitsubishi အနေနဲ့ E-Evolution ဆိုတဲ့ နာမည် ကို လျှပ်စစ် ကား အတွက်ပဲ သီးသန့် စီစဉ် ပြီးထုတ်လုပ်လာမှာလား ဆိုတာ ကို မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ လျှပ်စစ် Crossover တစ်စီး အတွက် Evolution ဆိုတဲ့ နာမည် ကို ပြန်လည်အသုံးပြုတာကတော့ Traditional အသွင်ကိုပဲ ကြိုက်နှစ်သက် ကြတဲ့ သူတွေ အဖို့တော့ ဆွဲဆောင်မှု အားနည်း လာနိုင် ပေမယ့်လည်း Lancer နဲ့ Pajero တို့ အပေါ်မှာတော့ အောင်မြင်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။
The post Render ပုံရိပ်တစ်ချို့ကို မြင်တွေ့လာရတဲ့ Mitsubishi ရဲ့ E-Evolution အမျိုးအစားအသစ်! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-21T13:00:36+06:30January 21st, 2021|MYCARS MYANMAR|